Mametra ny fidirana amin'i Machu Picchu i Peroa mba hiarovana azy amin'ny fizahan-tany marobe | Vaovao momba ny dia
Mametra ny fidirana amin'i Machu Picchu hiarovana azy amin'ny fizahan-tany marobe i Peroa
Maria | | About us, Peru
Vao haingana izahay no niresaka momba ny fomba nandraisan'ny governemanta teo an-toerana Venice andiany fepetra hiarovana ny Kianjan'i St. Marka amin'ny fizahan-tany marobe hatramin'ny taona 2018 ary toa hanaraka azy ireo any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao toa an'i Machu. .
Ary ilay trano mimanda Inca malaza indrindra dia eo an-tsoratry ny fianjerany noho ny filaharana goavambe hidina sy hivoahana, hividianana tapakila na hankany amin'ny fidiovana fotsiny. Ny fidiran'ny turista marobe mitsidika an'i Machu Picchu isan'andro dia nahatonga ny manampahefana hampiakatra ny fameperana hidirana amin'ilay toerana.
Noraisina ireo fepetra ireo taorian'ny fampitandreman'ny UNESCO hametraka an-tsoratra an'i Machu Picchu ao amin'ny lisitry ny lova manerantany raha tandindomin-doza izy ireo. Momba inona izy ireo?
1 Fa maninona no natao ireo dingana ireo?
2 Inona ny Machu Picchu?
3 Aiza no misy azy?
4 Maritrano sy ny tantara
5 Ahoana ny fomba hahatongavana any Machu Picchu?
Fa maninona no natao ireo dingana ireo?
Tamin'ny 1983 Machu Picchu dia nambaran'ny Unesco ho lovan'ny World Heritage Site. Tamin'ireny taona voalohany ireny dia nandray mpitsidika iray hetsy mahery isan-taona ny trano mimanda Inca. Saingy niova ny zava-drehetra tamin'ny 2007 rehefa nekena ho iray amin'ireo New 7 zava-mahatalanjona amin'ny tontolo maoderina nataon'ny orinasa Suisse New Open World Corporation. Tapakila valo hetsy no namidy tamin'io taona io ary nanafaingana ny zava-drehetra hatramin'ny taona lasa raha nahazo mpitsidika 1.419.507. Fisondrotana mahatalanjona fitsidihana sarotra sakanana.
Unesco dia nanome fe-potoana roa taona an'ny governemanta Peroviana hanatsarana ny fitantanana ny fiarovana ny tanàna raha tsy izany dia hampiditra an'i Machu Picchu amin'ny lisitr'izao tontolo misy lova atahorana izao. Talohan'ny nifaranan'ny fifamatorana, ary nahafaly ny rehetra, ny fepetra natolotra dia ampy teo imason'ny Komity mba tsy hampidirana ny tsangambato ao anatin'io lisitra io.
Ireto ny lalàna vaovao nanomboka tamin'ny 1 Jolay ary misy:
Voarara ny miditra ao amin'ny Machu Picchu raha tsy misy mpitari-dalana.
Ny mpitari-dalana tsirairay dia mety haka olona 16 farafaharatsiny.
Ora famangiana roa no apetraka. Vondrona voalohany manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro ary vondrona faharoa manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 17:30 hariva.
Ny tapakila dia manome alalana hijanona mandritra ny adiny efatra ao amin'ilay tranokala. Amin'izay fotoana izay dia afaka miala sy miditra indray mandeha fotsiny ianao mankany amin'ny serivisy.
Zava-dehibe ny fahazoana ny fidirana mankany Machu Picchu mialoha ny fitsidihana amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy.
Ny alahady ihany no fidirana maimaimpoana ho an'ny olom-pirenenan'i Cuzco.
Tsy azo atao ny miditra any Machu Picchu amin'ny tehina selfie, elo, zavamaneno, stroller zazakely, biby ary sakafo ary zava-pisotro.
Inona ny Machu Picchu?
Tanàna Inca izy izay midika hoe tendrombohitra taloha ny anarany ary alaina amin'ny toerana misy azy io. Ilay valan-javaboary voahodidin'ny fantson-drano, lampihazo ary tempoly dia inoana fa naorin'ny Inca Pachacutec tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tamin'ny androny dia ivon-toerana lehibe teo amin'ny fitantanan-draharaha, ara-pivavahana ary ara-politika. Ankehitriny dia rava ho toy ny Cultural Heritage of Humanity ny Unesco.
Any amin'ny 112 kilometatra avaratra andrefan'ny Cuzco, ao amin'ny faritanin'i Urubamba, dia voahodidin'ny fantson-drano, tempoly ary lampihazo ilay trano mimanda.
Maritrano sy ny tantara
Mizara roa i Machu Picchu: ny iray amin'ny fambolena izay misy ny tambajotram-pitrandrahana na ny terraces artifisialy ary ny an-tanàn-dehibe izay nahatanteraka ny asan'ny fitantanan-draharaha ary nisy efamira sy trano toa ny Temple of the Sun, the Temple of the Three Windows , ny Tempoly Main sy ny Sector Condor.
Ireo fanamboarana ireo dia manana ny fomban'ny Inca mahazatra: varavarana sy varavarankely na rindrina vita amin'ny trapezoidal misy endrika mahitsizoro mifanakaiky nefa tsy mampiasa amalgams.
Ny fananganana azy dia manaraka ny fomban'ny Inca mahazatra: tranobe misy rindrina vita amin'ny vato voaravaka amin'ny endrika mahitsizoro, natambatra nefa tsy nampiasa amalgam, varavarana sy varavarankely trapezoidal. Ny maritrano majestic dia misy rafitra 140 manodidina ny trano mimanda.
Machu Picchu dia hita noho ny mpikaroka Hiram Bingham III izay nitady ny renivohitra farany an'ny Incas Vilcabamba. Taona maro taty aoriana dia nambara fa "Sanctuary Historic of Peru" tamin'ny 1981.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Machu Picchu?
Raha te hihazo an'i Machu Picchu dia afaka misafidy làlana roa ianao: amin'ny alàlan'ny lalan'ny Inca na amin'ny lalamby mankany Aguas Calientes ary avy eo maka fiara na mandeha mandra-pahatonganao any amin'ilay tendrombohitra misy ilay trano mimanda.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Mametra ny fidirana amin'i Machu Picchu hiarovana azy amin'ny fizahan-tany marobe i Peroa
Fivarotana kafe 5 tsara ao Bruges
Manokatra malalaka ny zaridaina Generalife ny Alhambra any Granada